निजी अस्पताल सञ्चालक चिकित्सक दम्पत्ती नारायणी नदी किनारमा रिसोर्ट बनाउँदै « Online Tv Nepal
निजी अस्पताल सञ्चालक चिकित्सक दम्पत्ती नारायणी नदी किनारमा रिसोर्ट बनाउँदै
Published :2August, 2018 10:14 am
चितवन – निजी अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका यहाँको एक चिकित्सक दम्पत्तीले सुविधासम्पन्न रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउन लागेका छन् । भरतपुरस्थित ‘एलाइभ हस्पिटल एण्ड ट्रमा सेन्टर’का सञ्चालकद्वय डा. प्रमोद लामिछाने र डा. विष्णुमाया खरेलले ठिमुरा रिभरसाइड रिसोर्ट सञ्चालनमा ल्याउन लाग्नुभएको हो ।
उक्त रिसोर्टको एकातर्फ नारायणी नदी र अर्काेतर्फ पहाडी क्षेत्र पर्छ । तीन बिगाहा क्षेत्रफलमा फैलिएको सो रिसोर्ट क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा हरियालीले ढाकेको छ । रिसोर्ट क्षेत्रमा पानीका तीनवटा मुल रहेका छन् । जहाँ बाह्रै महिना पानीको सुविधा हुनेछ ।
पवित्र तीर्थस्थल देवघाट नजिक रहेकाले धार्मिक पर्यटक यहाँ आउने अपेक्षा गरिएको छ । गर्मी छल्नका लागि पनि सो रिसोर्ट उपयुक्त देखिएको छ । “नदी किनार र जंगलको फेदमा भएकाले पंखा र एसी चलाएर बस्नु पदैन,” खरेलले भन्नुभयो ।
खरेल दम्पत्तीले रिसोर्टसँगै रहेको तीन बिगाहा जग्गामा पुनःस्थापना केन्द्र तथा ट्रमा सेन्टर सञ्चालन गर्ने योजना बनाउनुभएको छ । गरीब, असहाय बिरामीका लागि निःशुल्क तथा धनाढ्यका लागि रकम लिएर उत्कृष्ट पुनःस्थापना केन्द्र सञ्चालन गर्ने योजनाको उनीहरुको छ ।
“हाडजोर्नीको समस्या भएका बिरामीले लामो समय उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि शितल, शान्त र रमणीय ठाउँको आवश्यकता पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । लामिछाने हाडजोर्नी तथा खरेल दन्त चिकित्सक हुन् ।